WARBIXIN: Afar Bilood ka Dib Qabsashadii Somaliland ee Tukaraq, Maxaa is bedelay, maxaase hadda ka socda? – Puntlandtimes
WARBIXIN: Afar Bilood ka Dib Qabsashadii Somaliland ee Tukaraq, Maxaa is bedelay, maxaase hadda ka socda?
May 8, 2018 W LAASCAANO
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Afar bilood ayaa kasoo wareegtay markii ay ciidamada Somaliland qabsadeen deegaanka Tukaraq oo fariisin u ahaaa Kastam dhaqaaleed ay lahayd Wasaaradda Maaliyada ee dawladda Puntland, waxaana kale oo ay ahayd Caasumada KMG ah ee gobalka Sool, maadaama Laascaanood ay horey u qabsatay Somaliland sannadkii 2007-dii.
Maanta afar bilood ayaa ka soo wareegtay markii ay Somaliland qabsatay magaaladaas Tukaraq, waxaana ilaa xiligaas laga dareemayaa goobahaas saan-saanta colaadeed ee u dhaxeysa labada maamul ee Puntland & Somaliland, mana jiraan wax wada hadal muuqda oo u dhaxeeya dhinacyada.
Somaliland waxay ku doodaysaa lahaanshaha Tukaraq & Yoocada oo masaafo dhan 20KM wax ka yar u jirta caasumada Puntland ee Garoowe, waxaana taasi ku dooday Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi mar uu ka hadlayay magaalada Hargeysa.
Puntland-na waxay ku dooday in deegaano kamid ah dhulkooda ay ku soo xadgudubtay Somaliland, gaar ahaana Sool, Sanaag & Cayn, isla markaasna aysan marnaba aqbali doonin in Somaliland ay ciidamadeedu ku sugnaadaan deegaanadaas.
Halka ay Somaliland sheeganayso Yoocada oo Garoowe u jirta wax ka yar 20KM, Puntland waxay sheeganaysaa deegaanka Lagu magacaabi LABI-GAAMATA oo masaafo aan badneyn u jira magaalada Burco ee gobalka Togdheer ee Somaliland.
Muranka xaduudaha labada dhinacba waa mid soo jiitamayay tan iyo dhismihii maamuladan, waxaana ilaa hadda aan jirin wax wada hadal rasmi ah oo ay dhinacyadu ka yeesheen sidii is faham ay uga gaari lahaayeen dhulka ay isku hayaan, waxaana taasi dheer Somaliland oo in badan kasoo durugtay deegaanada ay sheeganayso.
Siyaasiinta gobalka Sool ee ku kala jira labada maamul ee Puntland & Somaliland waxay qolo kastaa doonaysaa in uu hirgalo damaceeda, waxayna xooga saarayaan sidii qof uun ay ugu hari lahayd gobalkaas, waxaana bilihii lasoo dhaafay iyo maalmihii dhawaaba la arkayay Siyaasiintaas oo saldhigyo ka sameystay deegaanada Fararyaaale & Gambara oo ay kala joogaan ciidamada ugu badan ee labada dhinac Puntland iyo Somaliland.
Falanqeeyaasha arrimaha labadan maamul ayaa leh xasarada ka aloosan Tukaraq waxay saacad kasta isku bedeli kartaa dagaal toos ah, kaas oo haddii uu dhacana saameyntiisu ay si buuxda labada dhinacba uga muuqan doonto, gaar ahaana xagga safarleyda oo is taagi doona, waxa oo maamulada soo gaari doona khasaare dhanka dhaqaalaha, ciidamada iyo shaqooyinka ah, maadaama dagaalku uu yahay wax adag.
Diyaar garowga labada dhinacba wuxuu gaarsiisan yahay heerkii ugu sareeyey ee abid ay ka sameeyaan xaduudaha ay isku hayaan, waxaana la rumeysan yahay in ay dhici karaan dagaalo culus, haddii aysan deg deg ku imaan tanaasulaad ay labada dhinac midkood sameeyo, xili ay labaduba toos u diideen in ay ka baxaan deegaanadaas, ayna dadaalada nabadda qaataan.
Beesha Caalamka oo inta badan la socota muranada iyo arrimaha isku qabsiga dhulka ee labada maamul waxay isku dayda in ay joojiyaan xiisadahan bilowgoodii, Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating oo ka hor hadlayay Golaha Amaanka ee Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa ayaa sheegay in ay welwel ka qabaan halis dagaal oo ka dhacda gobalka Sool.
Lama garanayo waxay wajihi doonto xaaladdu afar bilood ka dib, balse Sadaasha ugu badan ee lahayo ayaa ah in ay dhinacyadu dagaalami karaan saacad kasta, ayna dhici karaan dagaalo culus oo aan horey labada dhinacba u dhexmarin, marka loo eego hubka culus, gaadiidka gaashaman iyo wax kasta oo ay qolo kasta awoodey oo goobahaas ay keeneen.
Dadka deegaanka ayaa ka walaacsan jawiga colaadeed ee ay mudada dhan 120 maalmood ku sugan yihiin, qaarkood ayaa ka guuray deegaanka oo cabsi awgeed u tagay deegaano kale o aysan wax badan ka fahamsaneyn, taas oo loo arkay barakac cusub.
Tukaraq Waa Dagmo Dhulbahante
Waxaana Somaliland keenay dadkii
Lahaa dhulkaas Yoocaduna waa Deegaan
Ma Ila Socotaan Ilmo Pintiland Badhi Weyn
gusku awalba b/land wuu noo gelijiraye been miyaa
DAAWO: Dowladda Yemen “Puntland waxay dib u dejin u sameysay Qaxootigeena”
Maamulka Gobolka Banadir Oo Muddo Kooban U Qabtay Ddaka Deggan Machadii Boostada Iyo Isgaarsiinta
Maxuu Ahaa Sarkaalkii Alshabaab Ee Isu Dhiibay Dowlada Somaliya
XOG: Xaggee ku dambeeyey Kiiskii Caaisho Ilyaas Aden, Maxayse Qoyskii uga hayaameen Soomaaliya, CADAALADDU AAWAY?
XOG: RW Kheyre oo Cadaadis adag wajahaya Iyo Mooshin socda.
Sirdoonka Soomaaliya oo qabtay nin katirsanaa Al Shabaab & Faahfaahin ka soo baxaysa
Maxay ka wada hadleen M/weyne Farmaajo iyo M/weynihii hore ee Soomaaliya C/qaasim Salaad?
DAAWO VIDEO:Yaab Gabdho Mataano 19 Sano ka Hor La Xaday Hada Facebook laga Helay
Maxuu Salaad Cali Jeelle Ka Yiri Shirkii Kooxaha Mucaaradka Ee Nairobi Ka Dhacay
Jubbaland Oo Sheegtay In Saraakiil Alshabaab Ah Isu Soo Dhiibeen Maamulka
XOG: Sh. Axmed oo kusoo wajahan Muqdisho, Xassan Sheekh oo sii joogay & Mucaaradka oo isku balan-saday iyo M/weyne Farmaajo oo ka fakaraya qorshe cusub.
Shirka Soo Bandhigidda, Dib u Habaynta iyo Casriyaynta Hay’addaha Dowladda oo Soo Xirmay.
DEG DEG+DAAWO: Puntland & Faderaalka oo ku kala kacay shir uga socday Muqdisho iyo mashaariic laysku haysto.
WARBIXIN: Hoggaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi & Ruushka oo kulmaya.
DAAWO: DF Soomaaliya oo ka hadashay shirkii ku soo dhamaaday magaalada Nairobi, Fariin-na u dirtay Siyaasiinta
Mucaaradka Somaliya ” Waxaan Ka War Helnay In Dowladda Ay Qorsheneyso Muddo Kororsi”.
DEG DEG+DAAWO: Mucaaradka Soomaaliya oo ku dhawaaqay in ay dhisayaan Xukuumad cusub.
Maxaa Ka Soo Baxay Kulankii Mucaaradka Ee Nairobi , Waxa Ay Dowlada Ku Eedeeyeen In Ay Ka Gaabiyeen Dagaalkii Alshaab Iyo Qodobo Kale
Amisom Oo Ka Hadashay Sawirkii Qabsaday Baraha Bulshada Somalida
FALANQEYN+DAAWO: Kulamada Siyaasadeed Nairobi, Qeylo-Dhaanta Farmaajo, Talaabada Dawlad gobaleedyada & Dalabka Beesha Caalamka.
XOG: M/weyne Farmaajo oo si deg deg ah ugu dhoofay dalka Masar iyo xog laga helay.
DAAWO SAWIRRO: Kulamadii ugu dambeeyey ee ka socda Nairobi, Xildhibaano, Wasiir hore iyo xubno kale oo shirsan.
UPDATE: M/weyne Farmaajo oo cadeeyey in dawladdiisa dhaqaale la’aan xoogan hayso.
WAR DEG DEG AH+DAAWO: Siyaasiinta mucaaradka ah & Madaxda Dawlad gobaleedyada Soomaaliya oo maanta ku kulmaya Nairobi, maxayse ka hadlayaan?
QM oo bixisay Mushaarka ciidamada Kenya ee kusugan Soomaaliya, maxayse tahay Ujeedadu?
XOG: DF Soomaaliya oo wajahaysa cadaadis weyn oo siyaasadeed.
Itoobiya : Ciidamada Baddeena Dhawaan Ayay Howl Galayaan , Saameyn Ayaan Ku Yeelaneynaa Badda Somaliya”.
Madaxweyne Farmaajo ” Waa Waqtigii Culimada Somaliyeed Ay Qaadan Lahaayeen Kaalintooda Xasilinta Dalka Iyaga Oo Mideysan”.
DEG DEG+DAAWO: Madaxweyne Farmaajo oo si adag uga hadlay shirarka Beesha Caalamka ay la yeelanayaan D. Gobaleedyada ee Nairobi?
DAAWO: Wariye ka tirsan BBC oo ka cabanaysa wicitaanada Al- Shabaab?
XOG RASMI AH+DAAWO: Madaxda D/gobaleedyada oo Beesha Caalamka ka codsaday labo qodob oo xasaasi ah.
DEG DEG: Mid kamid ah Taliyaashii ciidamada Somaliland ee G Sanaag oo la dilay.
MUUQAAL CAJIIB AH: Maxaad ka taqaan Ganacsadaha Dilaaga ah ee haddana dal M/weyne ka ah?
DAAWO: Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo loo gudbiyey Mooshin ka dhan ah Xukuumadda
DAAWO: Deni, Xaaf iyo Madoobe oo DFS kaga dacwoonaya Beesha Caalamka, Maxaanse ka ognahay Xaqiiqada?
DAAWO: M/weynaha Somaliland oo ka hadlay Ciidamadiisa kusugan Jiidaha Hore ee Puntland.
Daawo : Muxuu Yahay Ujeedka Nin 50 Waddan Awr Ku Soo Maray Oo Somaliland Gaaray
XOG: Miyey kulmeen M/weynayaasha Puntland & Somaliland todobaadkan sii dhamaanaya?